ကျိန့်ဟော် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ကျန်းဟီ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မလေးရှားနိုင်ငံ မလက္ကာရှိ ကျိန့်ဟော်ရုပ်တု
ကျိန့်ဟော် (鄭和; အမည်ရင်း မာဟော် 馬和၊ မာဆန်းပေါင် 馬三寶; ရတနာသုံးမျိုး) (၁၃၇၁ ခန့် - ၁၄၃၅) သည် တရုတ်ပြည် မင်မင်းဆက်မှ တမန်တော်လည်းဖြစ် ရေတပ်ဗိုလ်မှူးကြီးလည်းဖြစ်ပြီး ၁၄၀၅ ခုနှစ်မှ ၁၄၃၃ ခုနှစ်အတွင်း အရှေ့တောင် အာရှ၊ တောင်အာရှနှင့် အရှေ့အာဖရိကတိုက်များသို့ သင်္ဘောများဖြင့် ၇ ကြိမ်တိုင်တိုင် ခရီးနှင်ခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်း၏ ခရီးစဉ်များသည် တရုတ်သမိုင်းတွင် ‘ကျိန့်ဟော်၏ အနောက် သမုဒ္ဒရာ ခရီးစဉ်’ဟု (zh:鄭和下西洋; Zheng He to the Western Ocean) ကျော်ကြားသည်။
ကျိန့်ဟော်၏ ဘိုးဘေးများသည် အလယ်အာရှဒေသမှ တရုတ်ပြည် ယွင်နန်ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချ လာသည့် မိုဟာမက် စော်ဘွား၏ နောက်မျိုးဆက်များ ဖြစ်သည်။ ကျိန့်ဟော်၏ မူလ မျိုးရိုးအမည် တရုတ်စာလုံး ‘မာ’ သည် အာရပ်ဘာသာ ‘မိုဟာမက်’ မှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျိန့်ဟော်သည် ၁၃၇၁ သို့မဟုတ် ၁၃၇၅ ခုနှစ်တွင် မူဆလင်မိသားစုမှ ဆင်းသက်လာပြီး ညီအမ ၄ ဦးရှိသူ ဒုတိယသားဖြစ်သည်။ ကျိန့်ဟော်၏ အမည်ရင်းမှာ မာဆန်းပေါင် ဖြစ်ပြီး ဇာတိမှာ တရုတ်ပြည် ယွင်နန်ပြည်နယ် ခွန်းမင်မြို့ တောင်ဘက်အနီးရှိ ခွန်းရန်ဒေသ (ယနေ့ ကျင့်နိန်) ဖြစ်သည်။ သူ၏ အဘိုးနှင့် အဘေး နှစ်ဦးစလုံးမှာ မက်ကာသို့ ဘုရားဖူး သွားဖူးသူ ဟာဂျီဘွဲ့ရသူများ ဖြစ်သည်။
၁၃၈၁ ခုနှစ်တွင် သူ၏ ဖခင်ကွယ်လွန်သည်။ ထိုနောက် မင်မင်းဆက်၏ စစ်တပ်များ ယွင်နန်အထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင် အသက် ၁၁ နှစ်သာ ရှိသေးသည့် မာဆန်းပေါင်သည် အဖမ်းခံရပြီး နန်းတွင်း၌ ခစားရန် အပို့ခံရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် မာဆန်းပေါင်သည် ယုံလော့ ဧကရာဇ် (၁၄၀၃ - ၁၄၂၄) ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် လက်ရုံးတော် ဖြစ်လာသည်။ မင်မင်းဆက်၏ ဒုတိယမြောက် မင်းဆက် ကျန့်ဝန် ဧကရာဇ်အား နန်းချရေးတွင် ကူညီပေးခဲ့သောကြောင့် ဧကရာဇ် ဖြစ်လာသည့် ယုံလော့ နန်းတက်ပြီးနောက် မာဆန်းပေါင်အား ‘ကျိန့်’ ဟူသည့် မျိုးရိုးအမည်ကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး ‘ဟော်’ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
၁၄၂၅ ခုနှစ်တွင် ဟုန်ရှီးဧကရာဇ်က ကျိန့်ဟော်အား နန်ကျင်းမြို့ကို ကာကွယ်ရန် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၁၄၂၈ ခုနှစ်တွင် ရွှမ်းတယ်ဧကရာဇ်က နန်ကျင်းမြို့၌ ဆောက်လုပ်ဆဲ အထပ် ၉ ထပ်ရှိသည့် တာ့ပေါင်အန်းဘုရားကျောင်းအား အပြီးသတ် ဆောက်လုပ်ရန် ကျိန့်ဟော်အား တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ၁၄၃၀ ခုနှစ်တွင်မူ ‘အနောက် သမုဒ္ဒရာ’သို့ သတ္တမအကြိမ်မြောက် စွန့်စားခန်းထွက်ရန် တာဝန်ပေးခဲ့ပြန်သည်။  ကျိန့်ဟော်သည် သတ္တမအကြိမ်မြောက်လည်း ဖြစ်သည့် နောက်ဆုံးအကြိမ် ရေကြောင်းခရီးစဉ်၏ အပြန်လမ်း ၁၄၃၃ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Mills (1970), p. 5.
↑ Levathes (1994), p. 61.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Encyclopedia of China: The Essential Reference to China, Its History and Culture, p. 621. (2000) Dorothy Perkins. Roundtable Press, New York. ISBN 0-8160-2693-9 (hc); ISBN 0-8160-4374-4 (pbk).
↑ Levathes (1994), pp. 61-63.
↑ Mills (1970), p. 6.
China's Great Armada and its Leader Zheng He
Gavin Menzies' official website about his research on Zheng He
Zheng He in the Americas and Other Unlikely Tales of Exploration and Discovery
Academic website debunking Menzies' theories and the map
Zhenghe.webs.com Zheng He Info Site
Ship imitates ancient vessel navigated by Zheng He|peopledaily.com|September 25, 2006
China Has an Ancient Mariner to Tell You About article about Zheng He from the New York Times
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျိန့်ဟော်&oldid=518735" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၁၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။